सलमानले निर्देशन दिए, सोनाक्षीले घटाइन् तौल – Khabar Silo
काठमाडौं– बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ३२ वर्षकी भएकी छिन् । २ जुन १९८७ मा मुम्बईमा जन्मिएकी सोनाक्षीले पहिले त अभिनयमा लाग्छु भन्ने सोचेकै थिइनन् । तर, सन् २०१० मा उनले सलमान खानको फिल्म दबंगबाट बलिउडमा इन्ट्री गरिन् । त्यति बेला उनको तौल ९० किलो थियो । सलमान खानले उनलाई तौल घटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
उनले एक अन्तर्वार्तामा सलमान खानलाई धन्यवाद दिँदै भनेकी थिइन्– मैले सलमानकै कारणले आफ्नो तौल घटाएँ । फिल्ममा आउनकै लागि आफूले ३० किलोभन्दा धेरै तौल घटाएको उनले बताएकी थिइन् । उनले जिमसँग एलर्जी भए पनि आफूले सलमानले भनेकाले नै त्यसमा काम गरेको बताएकी थिइन्।
तर, सोनाक्षीले कहिल्यै पनि जिम गएपछि आफ्नो तौल नाप्न चाहिँ नापिनन् । तर, उनलाई आफू विस्तारै फिट हुँदै गएको चाहिँ आभास भयो । यसका लागि पनि उनले सलमानलाई नै धन्यवाद दिन्छिन् ।
सलमान–ऐश्वर्यालाई एकसाथ हेर्ने साहिदको चाहना
बलिउडमा कुनै समय नायक सलमान खान र नायिका ऐश्वर्या रायको जोडी निकै हिट थियो । उनीहरुको जोडीलाई धेरैले रुचाएका थिए । उनीहरु चलचित्रको पर्दामा मात्र होइन, पर्दा बाहिर पनि जोडी थिए । उनीहरु गहिरो प्रेममा थिए ।
तर, सन् २००२ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘हम तुमारे हे सनम’ पछि सलमान र ऐश्वर्यालाई एकसाथ पर्दामा ल्याउन कुनै पनि मेकरले सकेका छैनन् । उनीहरुलाई पर्दामा एकसाथ हेर्न चाहने दर्शकको संख्या निकै छ । दर्शकले मात्र नभएर, बलिउडकर्मी पनि उनीहरुलाई एकसाथ पर्दामा हेर्न चाहन्छन् । सलमान र ऐश्वर्याको जोडीलाई एकसाथ हेर्न चाहने कलाकारमा पर्छन् साहिद कपुर ।
अन्तरवार्तामा साहिदलाई ‘पद्मावत’मा नयाँ कलाकार राख्नु परे कसलाई छान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरिएको थियो । यो प्रश्नमा साहिदले भने–‘मलाई सलमान र ऐश्वर्याको जोडी खुबै मन पर्छ । उनीहरुलाई पर्दामा एकसाथ देख्ने रहर छ । म उनीहरुलाई नै रोज्छु ।’
सलमान खान र ऐश्वर्याको नाम अहिले पनि मिडियामा चर्चामा रहन्छ । तर, यो जोडीले एकसाथ पर्दामा काम गर्ने संभावना भने अब छैन ।
कोमल वली र रामहरी खतिवडाको विवाह चर्चा ! विवाहको तयारी आधा पूरा भइसक्यो: खतिवडा
काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले बुधबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा भव्य चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्यो । बडादशैं, तिहार, छठ, नेपाल संवत ११४० तथा सम्पूर्ण चाडपर्वको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा सत्तारुढ नेकपाकादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेससम्मका नेता कार्यकर्ताहरुको भीड लागेको थियो । दिउँसो १२ बजे सुरु भएको चियापान कार्यक्रममा विभिन्न नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, संचारकर्मी आ–आफ्नै […]
सलमानसँगको प्रेमबारे क्याट्रिनाले यसो भनिन्
एजेन्सी— सलमान खान र क्याट्रिना कैफको जोडीलाई रिल लाइफमा धेरैले मन पराएका हुन्छन् । यो जोडी रियल लाइफमा पनि कुनै समय जमेको थियो । जुन फिल्ममा यी दुईले काम गरेका छन्, ती फिल्महरु हिट पनि भएका छन् । अब केही दिनपहिले क्याट्रिनाले सलमानसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे बताएकी छिन् । क्याट्रिनाले इन्डिया टुडेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, […]
एजेन्सी । ९० को दशकका निकै चर्चीत बलिउड अभिनेता हुन् गोबिन्दा । उनको ससुराली नेपाल हो । त्यसैले उनी बारम्बार नेपाल पनि आइरहन्छन् । उनी धेरै पटक आफ्नो पत्नीका साथ नेपाल आएका छन् । पशुपतिनाथ मन्दिरले पनि उनलाई लोभ्याउँछ । त्यसैले उनी केही वर्षको अन्तरालमा पशुपति दर्शनका लागि पनि नेपाल आउने गरेका छन् । विज्ञापन […]
दुई फिल्म खेलेकी साराको कमाइ वर्षमा ५० करोड !
कतारको श्रम कानूनमा सुधारः नेपालीसहित लाखौँ आप्रवासी कामदारले यस्ता लाभ पाउनेछन्